Daawo: Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka hadlay wuxuu ku arkay Soomaalidii Isugu timid Carmo & Cida kala fogeysa | Kalshaale
Boosaso (Kalshaale) Garaadka Guud ee Beesha Dhulbahante oo Khudbad Qiimo leh ka jeediyey Munaasibada Caano-shubka Beel daaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil oo maanta dhacday magaalada Carmo ee Gobolka Barri ayaa ka hadlay Sida Bulshada Soomaaliyeed ay walaalo u tahay.
Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa sheegay in Bulshada Soomaaliyeed ay yihiin Dad walaalo ah oo isjecel, Balse ay kala Fogeeyeen Siyaasiyiin dano gaar ah Jeebka ku sita, Wuxuuna Tusaalle usoo Qaatay sida Munaasibadan looga soo wada Qayb galay. Soomali waxba iskuma Qabto, Walaalnimada waxaa laga dareemayaa Golahan, Cidii Xadhkaha lagu kala xidhay ka furi lahayd ayay doonaysaa ”
Garaad Binti soo dhawoow, war horta Dhulbahte Kalshaale fulaysanaa!
Haddad Garaad Binti ka hadasho way masixin.
Fucking geelwas Dhuloos oo laangaab ah.
Isamada Puntland soo dhiga waa cay hadaan doono sida Boqor Burhaan iyo madaxweynaha Gaas Uusbuur.
Nin aan wax laga sheegi karin umad maba matali karo.
Garaad Binti oo caawa Carmo jooga waa good news for Harti oo Cali Injir daba socon..😎🙄😜
Hooyada Iyo Dhabayaco da tahay ba waas, Reer Binti Jareer tii iyo sheegato is bahaysatay baad awaalba aahydeen iyo Garuucdi habartii Oromo ee laso qafashaay midgo laangaab aah idinka laa idiku yaqan!! Burhan Jareer iyo Cabdi uurweyne dawada kuu shaqeyaa ba dhakada ka was..
laand of punt
kajeedi afkaaga uraya e aad qubada ku cunta
xormadle Garaad jaamac garaad cali inan gumeedyaho
u niikiya sida naagaha halamash yohow halamashku dhalay
e habarta gaalada ah sorabaysatay edebdaradana
kasobartay dadka cis iyo sharaf badanbaad
afka lagelaysa duliyohow sida adhiga u ciya
waanu kaxunahay inuu Garaadkayagu tegay meel ayjoogaan
laand of o kale nacas ilko dhaadheer
sxb horta qubadu waa maxay kkkkkkkk haylayaabin
waxan arkay hawiye iyo majeerteen isku caayaya kkkkkkkkk
waxan u fahmay inay tahay cunto aan caadi ahayn
yacni laada cunin dad gaari cunaan sida laand Of kkkkkkkkkk
jaaaban kasugaya WBT
Garaad Ka Boqortoyada Dhulbahante Guuleeyso Cadoowgagu hajabo..
DIIDIINKA BADDA=QUBO. WBT
Duurjoog Dhuloos kkkkkkk
Xurmadle iyo blahaa blahaa!
Muxuu xurnad ku yeeshay ma cilmi aduun iyo mid aakhiro ayuu midna bartay? Sida diin iyo modern science? Abihiis ayaa Garaadka Baharasame ahaa!
Nothing else! New York nin dhalo u dhiibay ayaan aqaan intii Aabihi nolaa, maanta war kama hayo..kkkkkkkkk
Ma nin kaabo qabiil loo xayeysiiyo ayaad imoodeen?
awowgey iyo dhashii Islam Farax oo Sayid Maxamed Xiinfiniin ugu gabyey ayaa fadhiga uga kicin waaba geelwas Bahararsame….
Ma sidiina ayaad mooday dad kaabo qabiil u gurguurta!
Allow alle 😝
Wiil Cumar Wacays.
Magacaaga iga jaahil bixi inta wax kusoo qorin!
Will Cumar Wacay maxaa laga wadaa? Ma qabiilbaa!
Haduu qabiil yahay “timirtii horeba dab loo waa”
Dhuloos cidna kama aqoon haddii Dhuloos la dhaafo oo maanta iscayrsanaya!! Kkkkkkkkk
Walaahi aniga 40 jira ayaa iigu horeysay Bahararsame, Dhuloos dirqi ku aqiinay oo hal jilib ka mid ah aqoon!
Maanta ku garaado gooyey!! Maadaama aqaan Barkad iyo Baharatsame!!
Nin saaxiibo nahay ayaa hadda kahor igu yiri anaga oo meel fadhi kurir ah joogna: war ninyahow Dhulbahabte waa dad Garaadkooda laga marin ee xurmadle u dheh! Intaan iri Garaad iyo Islam muxuu yahay! Wuxuu igu yiri; Ma sida idinka ayaad mooday oo haddii Islamka Cumar Maxamuud istaag damco naga fariiso la oran!
Hadda xafladaan waa joogaa Islamka Cumar Maxamud cid buunbuuninaysa arki maysid waayo waa kaabo qabiil waxaa ka mudan Gaas!!
Dhuloos 13 Garaad maanta dhan hadba xadlad meelkasta dhigan, hadaad hadasho cayda kugu dhacda yaabin sida Nebiga caysay!
Bal ila arka sida Khatumo hanoolato iyo kan samaysan Wiil Cumar Wacaysle dhiiga ugu karay!
Beeldaajaha Cali Saleeban oo aabihiis dhintay maanta marka la caleemo saaro ayaa warkiisa kuugu dambaysa! Maalinta reerkiisa wax dhacaan loo yeerin inta ka horaysa waa caruurtaada korso!!
Kaabo qabiiladii beryahan xoog yeesheen! Waa in la kala cayriyo oo dadka meel ka fariista la yiraado!
Waad mahadsantahay qubo aan maqlo kalshaala iiigu horaysay
Land of punt, horta ninyahow waxaan kugu raacsanahay arrin aad ka dhawaajisay oo ah in eey beesha aad sida beenta ah u wada sheegan jirteen Harti, iyo Daarood eeyy sida aad sheegtasy marayaan 13 garaad. Sanad kabacdina eey dhici karto in 13 kaas garaad eey noqdaan 33 garaad. Kuwaan Dhulbahantaha ah oo maraya wadadii iyo jidkii nijaaaska ahaa oo eey mareen daanyeerada Hawiya 28 sanno kahor. Dhulhabahantahu waa fahmi waayeen sida loo saarto lacagtaada qamaarka “kaarka” guuleeysanaya. Marwalba meesha iyo dhinaca qaldan amaba jabaya ayeey la saftaan; sida, mar askar ayeey u ahaayeen madaxweeynahii hore ee Somaliya [ilaahey ha’u naxariistee] jaale Siyaad oo ahaa qabyaaladiiste doqon ah, oo daanyer ah, oo ka baqay xataa dadka Somaliyeed in eey bartaan cilmi diini islaami ah, amaba cilmi calmaani ah. Isaga oo rabay si qabiil ah in isaga iyo qabiilkiisa [sidaad rabto u sii daadaji, laike oninon, qabiilada Somali, Daarood, Mareexaan etc] markii ku xigtay waxeey taageereen oo u niikiyeen Harti, iyo Majeerteen, hadeer oo lajooga waa jahawareersan yahiin, ma Majeerten iyo kaarkooda ayaan u niikinaan, misse Isaaqaan, eey Ogaadeen iyo Majeerteen, iyo xataa dowladda dhexe ee uu hogaamiya madaxweene Daarood lagu sheego, Mr Farmaajo naga qban weeyeen ayaan u niikinaa, misse Imaaraadka carabta iyo Israel ayaan u niikinaa hahahaha!
Marka dadkaan Dhulbahante, ee daraawiishtii hore ah, waa loo qayilay. Waa gob eey rifeeyso gun sida eey dad isticmaalaan. Waa daanyero meel laga jirro iyo meel looga soo socda aanan aqoon. Waa dad qaan ku maqan laga jarrayo, sida eey ila tahay. Laakiin, waa dad baaqigooda uu wanaagsanaan doona.
Boqortooyo Wayn oo beelwaynta Dhulbahante kuu faanto shaanta gees ee Somali laga yaqaano, Sayid, Shariif iyo Shacaab ba Uu istaago, Boqor Beesha Dhulbahante kuu dharaato, Uu Hogaan uu Yahaay Mutacaliin iyo Aftahaan beeshu Cimaamato, Saldanad Aan Kuu abtirsano, Jiir iyo joog ba Dhasha Darawiish leedaho, Tariikhdana Kuu Xusaan Oo Abanduule, Caadil iyo Boqor deeqsi aah baa leeh, buu Dhabayaco Dhashi Oromo aah oo, Micnaalawe miyi kaayimi aah oo Islaan iyo Habar aan lagaranayn soo hadal qaada..
Long Live Saldanada Dhulbahante Xurmaadle Garaad Jamaac Garaad Cali Garaad Jamaac Garaad Cali Garaad Maxamud Garaad Maxamed Garaad Cali kaa Naax oo Naafta waa!!